Amaxabiso amatsha kunye nokwehla kwiMadrid Stock Exchange | Ezezimali
Njengayo yonke iminyaka emitsha eqala, inothotho lweendaba ngokubhekisele kwii-indices zentengiso yesitokhwe se-Spain. Kule meko, ngokudityaniswa kwamaxabiso amatsha kwaye, kwelinye icala, ukunyamalala kwabanye ayisayi kubakho kwimigangatho yorhwebo. Nokuba yeyiphi na indlela, kuya kuba lula kuwe ukuba wazi ukuba ngawaphi amaxabiso aya kuchaphazela lo nto kuba kusenokwenzeka ukuba uyamangaliswa kwezi ntsuku zokuqala zikaJanuwari.
Eli nyathelo lokusebenza liyakuthetha ukuba ukusukela ngoku uya kuba namaxabiso esitokhwe onokuthi usebenze ngawo ukwenza ulondolozo lube nenzuzo. Kwaye kude kube kulo nyaka bakulo babengekho kwimeko yokuqeshwa. Ngokuchasene noko, abanye sele abayi kuyamkela imisebenzi yakho Utshintshiselwano lwesitokhwe kwaye ke uya kuba nemida kuzo. Ewe kunjalo, olu hlaziyo aluyonto intsha okanye ikhethekileyo, kodwa yenzeka rhoqo ngokujika konyaka.
Kwelinye icala, lo ngowona msitho weqonga wenoveli uya kuba kukuhla okuqinisekileyo kwexabiso Iziseko zophuhliso ze-Abertis, emva kokurhoxiswa kwiNtengiso yeStock ngo-Agasti 6 emva kweNkxaso yokuFunyanwa koLuntu (i-OPA) eyenziwe yiHochtief kunye neAdveo Group International. Olunye lokhuseleko olwalunomgangatho othile ophezulu kwisalathiso sebhentshi yesilinganiselo. Ukushiya icandelo lezothutho elikhuselayo kwimeko ebuthathaka kakhulu kunye nokubonakaliswa okungabalulekanga ngokwenyani xa kuthelekiswa nezinye izalathiso zesitokhwe saseYurophu.
1 I-Madrid Stock Exchange: amahla ndinyuka
2 Amaxabiso abangela ukukhutshwa
3 Ilahleko kwimarike yemasheya yaseMadrid
4 Iya kuyichaphazela njani imisebenzi yakho?
5 Iindlela ezinala maxabiso
6 Iprofayile yobuchwephesha yeenkampani ezintsha
I-Madrid Stock Exchange: amahla ndinyuka
Kulo nyaka umiyo, ii-equities zaseSpain ziya kwenziwa zizonke 127 amaxabiso, emva kokudityaniswa kwamacandelo amane amatsha kunye nokususwa kwamanye amane. IKomiti yoLawulo yeSalathiso esiBanzi seMadrid Stock Exchange (IGBM) ithathe isigqibo, ngokungqinelana neMigangatho yobuGcisa yoBume kunye nokuBalwa kwee-Indices, ukuvuma ukwakhiwa kwe-IGBM kunye ne-Index iyonke kwisiqingatha sokuqala se-2019.
Ngokusekwe kurhwebo kunye nedatha eyinkunzi yonyaka, amaxabiso amane amatsha adityaniswa kwisalathiso kwaye amanye amane alahliwe ngokubhekisele kulwakhiwo lokugqibela, ekuya kuthi ngalo i-IGBM kunye neTotal Index kwisiqingatha sokuqala se-2019 Inamaxabiso ali-127.
Ngokunjalo, iKomiti iphakamise ukuhlengahlengiswa kwamacandelo apho i-Financial and Real Estate Sector Index yahlulwe yangamacandelo amabini: i-Financial Services Sector Index kunye ne-Real Estate Services Sector Index. Ngokuhambelana nesi sicelo, i-Index yeCandelo lezeMali elitsha iya kuba nayo Iimpawu ezingama-4 zamacandelwanaIiBhanki kunye neeBhanki zokuGcina, i-Inshurensi, iiNkampani eziHambayo kunye nokuHamba, kunye neeNkonzo zoTyalo-mali. Okwangoku, iCandelo leNkonzo yokuThengiswa kweZindlu liya kuba nee-Indices ze-2: Iarhente yokuThengisa izindlu kunye nabanye kunye ne-SOCIMI.
Amaxabiso abangela ukukhutshwa
La ngamaxabiso oza kuba nawo ukusukela ngoku kwizangqa zorhwebo kwimarike yemasheya kunye nesishwankathelo sotshintsho ngokubhekisele kulwakhiwo lokugqibela ngolu hlobo lulandelayo:
Ukubanjwa, njengexabiso lokwamkelwa okutsha kwiNtengiso yeSitokhwe nge-21 kaNovemba ka-2018. Ifakiwe kwi-Index yecandelo leeNkonzo zabaThengi, uLonwabo, uKhenketho kunye neNgeniso yokuNgenisa izihambi.
IArima yeNtengiso yeArima, njengexabiso elitsha lodweliso ngo-Okthobha 23, 2018. Ifakiwe kwiZalathiso zeCandelo leeNkonzo zeZakhiwo, iSocimi Subsector.
Iindleko zezabelo Berkeley Energia Limited Ixabiso lokungeniswa elitsha kwiStock Exchange ngoJulayi 18, 2018. Ifakiwe kwi-Index yeZinto eziSisiseko, iCandelo loShishino kunye nezoKwakha, iZimbiwa, iMetali kunye neMetallic Transformation Subsector.
ISolarpack Technological Corporation, njengexabiso elitsha lokwamkelwa kwiStock Exchange ngoDisemba 5, 2018. Ifakiwe kwioyile yecandelo lecandelo lamandla ombane, icandelo lamandla ahlaziyekayo.
Ilahleko kwimarike yemasheya yaseMadrid
Ngokuchasene noko, uyakufumanisa ukuba olunye ukhuseleko alusayi kubakho kwaye ke ayizukuba yinto yokusebenza kwakho kwiimarike zezabelo. Oku kulandelayo esikubhenca apha ngezantsi ukuze uyiqwalasele xa ulungiselela iphothifoliyo yakho elandelayo yotyalo-mali.
Iziseko zophuhliso ze-Abertis, Ngokurhafiswa kwiNtengiso yeStock ngo-Agasti 6, 2018, emva koMnikelo woLuntu wokuFumana (i-OPA) owenziwe nguHochtief AG.
Iqela leAdveo laMazwe ngaMazwe, unqunyanyisiwe kurhwebo yi-CNMV nge-14 kaNovemba 2018 ngenxa yenkqubo yokuxhasa kwakhona kunye nokwamkelwa kwendlela yokhuselo ebonelelwe kwinqaku le-5bis yoMthetho 22/2003.
I-Borges yezoLimo kunye neeNtshu zoShishino, ukungazifezekisi iindlela zokukhetha kunye nokusisigxina.
Amaphepha aseYurophu kunye neKhadibhodi, njengesiphumo sokuthatha inxaxheba kwizabelo zayo ezenziwe nguDS Smith Plc. Iinjongo zazo kukukhuthaza ukukhutshelwa ngaphandle kwezabelo kuthengiso kwiiSpanish Stock Exchange.
Iya kuyichaphazela njani imisebenzi yakho?
Ngokumalunga nokukhuseleka okutsha kwintengiso yemasheya, yeyiphi eyona nto inomdla kuwe okwangoku ukusukela kule veki ungasele usebenza kuyo, ukubeka nokuthengisa iiodolo njengakwezinye. Ngapha koko, kunengxaki yokuba akukho luhlalutyo oluneenkcukacha kwimigca yeshishini lakho. Njengokuba bengabonisi uhlalutyo lobuchwephesha ngesizathu esilula sokuba kude kube ngoku bebengathengiswanga esidlangalaleni. Ke ngoko, kuyakuxabisa umsebenzi omninzi ukwenza isigqibo sokumisela ukuba ngaba yeyona ndlela ilungileyo yokwenza ukuba inkunzi ifumaneke kunyaka onenzuzo.
Kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba olu khuseleko aluxhomekekanga, okomzuzwana, kumaxabiso eearhente zezemali kunye nabalamli. Uya kuba neeparitha ezimbalwa zenjongo yokuvula izikhundla kwaye kule meko imingcipheko iya kuba phezulu kakhulu kunakwezokhuselo ezidweliswe kwiimarike zezabelo zaseSpain iminyaka kunye neminyaka. Ukongeza, akukho mathandabuzo okuba umthamo wabo wokurhweba uya kuba sezantsi kakhulu kuba inxenye elungileyo yezi zindululo zemarike yemasheya zivela iinkampani ezincinci kakhulu zokwenza imali. Ukuya kwinqanaba lokuba ziya kutshintsha ngakumbi kwiintsuku zokuqala zokuthengisa.
Iindlela ezinala maxabiso
Okokuqala, kubaluleke kakhulu ukugxininisa ukuba ukusebenza kunye nala maxabiso kunzima ngakumbi kunabanye. Phakathi kwezinye izizathu kuba akukho kubekwa esweni kwangexesha lokuziphatha kwabo kwiimarike zezabelo. Akumangalisi ukuba, bengenayo imvelaphi kwi Imbali yexabiso kwaye oku kwenza ukuba kubenzima ngakumbi ukuvavanya ukuba bakwixabiso elifanelekileyo lokuthenga okanye hayi. Ubunzima bokuhambisa utyalo-mali bukhulu kakhulu, apho kwelinye icala, kungakhange kubhekiswe kwimeko yohlaziyo enokuthi ivele ngamaxesha onke.
Kwelinye icala, enye yeempawu zayo ezifanelekileyo zezi ukuguquguquka kumaxabiso abo. Umahluko ophakamileyo kakhulu kulungelelwaniso lwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi kwaye inokudlula amanqanaba e-5%. Kule meko ye-atypical, kuyinto eqhelekileyo ukuba abatyali mali abancinci nabaphakathi bathembele kolunye uthotho lokhuseleko kwaye abayi kudala naziphi na kwezi ngxaki. Ngabatyali mali kuphela abanephrofayili eqikelelweyo ngakumbi abanovakalelo ekusebenzeni kwezi nkampani zingene nje kwiimarike zezabelo.
Iprofayile yobuchwephesha yeenkampani ezintsha
Iinkampani ezenza amatyala abo kwiimarike zezemali zibonise iimeko ezichazwe kakuhle. Ukuqala, ezi zibambiso zezemali ezincinci kakhulu kwaye zizibambiso ezimbalwa kuphela ezinokuhambisa amaxabiso kwelinye icala okanye kwelinye. Ngokufanelekileyo, Atyekele ekuphazamiseni Ngezandla ezomeleleyo zeemarike zezemali. Ziyingozi ke ngoko kwaye ukusebenza kwazo kubekwa emngciphekweni okuzo. Ukuya kwinqanaba lokuba kunokuthiwa ngaphandle koloyiko lwempazamo ukuba kunzima kakhulu ukwenza ukuba imali ekhoyo ifumane inzuzo ngezi zindululo zemakethi yesitokhwe. Ngaphandle kwezinye izinto zobugcisa.
Enye yezona zinto zixhaphakileyo kwezi nkampani ziqala ukurhweba ngee-equities kukuba zivulelekile ngakumbi Uhlaselo olucingelwayo. Akumangalisi ukuba babe nokuya kwixabiso le-4% ukuya kwi-3% yexabiso labo kwimizuzu embalwa. Ngabatyali mali kuphela abanamava ngakumbi kwiimarike zezemali ezivulekileyo ekusebenzeni kwezi mpawu. Apho imingcipheko iphezulu kwaye inzuzo abanokuyinika yona yenza ukuthandabuza ekunzima kakhulu ukukucacisa nangaliphi na ixesha.
Kananjalo asinakulibala ukuba ezi nkampani azinayo imigca yeshishini enenzuzo kwaye kwiimeko ezininzi ngenqanaba lamatyala elitsala umdla wabahlalutyi bezemali. Kule meko ngokubanzi, ayisiyongcamango ilungileyo yokutyala imali. Ngokukodwa kunyaka unzima kwimarike yemasheya njengoko kubonakala ngathi kuya kuba njalo. Ewe kunjalo, kukho iindlela ezingcono zokwenza ukonga kunenzuzo kwaye kulapho kuya kufuneka uye kula maxesha ngqo.
Eli ayiloxesha lokuzama ukurhweba ngokulingana kuba kuninzi okusemngciphekweni ukusukela ngoku. Akukho nto ingaphantsi kwemali yakho. Apho imingcipheko iphezulu kwaye inzuzo abanokuyinika yona yenza ukuthandabuza ekunzima kakhulu ukukucacisa nangaliphi na ixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Amaxabiso amatsha kunye nokwehla kwiMadrid Stock Exchange
Ngawaphi amaxabiso azikhuselayo okutyala kwimarike yemasheya?